トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ngebuhle nebubi ukukhetha umthamo high ukusetshenziswa pachinko wamakhaza
Wonke umuntu, ireferensi ukhethe pachinko ezitolo, umkhathi inkonzo senkokhelo futhi izitolo, njll, ngicabanga ukuthi ezihlukahlukene lapho, kodwa isimo yokusebenza uma ufuna inzuzo esele kuyoba iphuzu izitolo ezinkulu ukukhetha.
isimo ezisebenza kufana sasemakhazeni pachinko, kukhona futhi onohlonze yilokhu ezovunyelwa ukuzizwa ukuzixazulula. Uma ungaqinisekile kuphi hit okungukuthi, ngicabanga ukuthi abantu abaningi wawuzongena izitolo ezinhle isimo ukusebenza. Ngisho uma zibhekwa kusuka engele ahlukahlukene, kodwa ngithi emakhazeni pachinko ezihlanganisa ingqikithi ibhizinisi esikhethekile kuye kwaba yimpumelelo, e, nokuhle pachinko emakhazeni we emihle nemibi ukusebenza, sizobheka ukuthi iphuzu okunjalo. ukusebenza
Kuyaphawuleka ukuthi okuhle, izidingo zonke ikhasimende, kuyinto yaba pa o ukuthi sesigcwalisekile. Umoya Wokungenisa Izihambi kanye nezinsizakalo into, yebo, ingxenye wenkokhelo Phakathi kwabo kuyoba khona iphuzu enkulu. Ngo ukusebenza kuhle pachinko emakhazeni, ingenye ezingaba ukuthi ngezinga elithile ngokwesilinganiso, wenkokhelo sipho. Futhi singaphezu ongakwenza uwine yokuthengisa, ungase futhi ulindele njalo wenkokhelo.
yebo, Ingabe ngezinye izikhathi futhi esobala iqoqo usuku lapho, kodwa nsuku zonke ngawakhamela imodeli, ngoba ukuhunyushwa okuyinto aphume ngendlela yalo, kuye ngokuthi inhloso, kuba ukuthi kungenzeka ukunqoba iyakhula.
Ngaphezu kwalokho, ezihlukahlukene amakhasimende kuyofika ukuvakashela. Ngoba ngisho nalabo abangamazi malini pachinko siyeza esitolo, yesikhulumi futhi unyakazise ngamandla, uma inhloso ume ukuthi lapha ngamunye, ngokuvamile ingaba kukhona itafula khulula. Futhi ngokwezinga elithile, ukuze nami turning, yokonga incane futhi ungakwazi lindela it ukudweba hit. Iningi izinzuzo egijima okuhle pachinko esitolo, wena lapho.
Ngaphezu kwalokho, kusukela ezihlukahlukene zabantu ukuza, kungenzeka kube ulwazi iqoqo. izitolo Ezinhle ukugijima, banjalo amakhasimende amaningi avamile, uma sixhumana ngempumelelo nabantu abanjalo, ezihlukahlukene ulwazi ezinqumela afe uyinto bengena indlebe.
Nokho, ngakolunye uhlangothi, zikhona Yebo nemibi.
稼 Iqiniso lokuthi umsebenzi kuhle, isizinda esihle ukuvula maduze get wahlala phansi. Njll onobuhle eyayithandwa ukuma zakamuva, ke uyongcwatshwa ngokushesha nge abashisekeli. Yima ukubanga khetha kuba ezinzima, lithi operation demerit muhle pachinko emakhazeni. Ukuze ahlale etafuleni okuhloswe, kusukela ngayizolo, futhi ukuba yesikhulumi uphenyo lokuqala, okuyinto ihlose, uzodinga ukuvakashela ngakusasa ekuseni.
Ngaphezu kwalokho, nge sinye closeout, kanye ushiya etafuleni, ukuthi ukubuya othile owayehleli sikhathi, kuyoba nzima kuyoba. Lapho lemali utshalomali iye yanda, lapho uyeke, a ukuthola ukuthi yesikhulumi ezihambayo, ngithi omunye demerit kuba nzima.
isimo ezisebenza kuyinto izitolo ezinhle, akungabazeki kuba esitolo ezinhle. Ithi esitolo ehlanganisa charm ukuheha abantu, kodwa iqiniso lokuthi kusimo esinjalo futhi, ngiyeza kusengaphambili nokulwa abantu washintsha ukukhumbula.